Qaamuuska kumbuyuutarka (A) | Ragga Stylish
Si aad ugu caddeyso adduunka sayniska kombiyuutarka oo aadan u ekaan toto markii ay kaaala hadlayaan, waa inaad marka hore ogaataa qaamuuskiisa, macnaha eray kasta, ereygiisa iyo waxa uu dhab ahaan u dhigan yahay.
Luqadda xisaabinta waxaa lagu gartaa iyadoo la adeegsanayo mala-awaallo fara badan, maadaama luqadda Ingiriisigu noqotay luqadda ugu badan ee xisaabinta. Adeegsiga ereyada qaarkood waxay ku kala duwan yihiin Spain iyo Latin America.
Iska dhaaf: Software-ka aan dib loo suuqayn ama loo qaybin maxaa yeelay xiisihii ganacsi ee sidaas loo qabtay way joogsatay markaa macquul maaha in sharci lagu helo.
ActiveX: Tiknoolajiyada qaybta loo sameeyay shirkadda Microsoft ayaa loo isticmaalay in lagu abuuro kontaroolo loo adeegsan karo barnaamijyada ama lagu abuuro degello leh is-dhexgal ballaaran.
Helitaanka tooska ah: Nidaamyada hawlgalka ee Microsoft, waa astaan ​​u sahlaysa furitaanka barnaamij ama fayl cayiman. Waxay leedahay door la mid ah xiriiriyeyaasha calaamadaha ah ee nidaamyada Unix, laakiin farqiga u dhexeeya waxaa kaliya lagu aqoonsan karaa muuqaalka muuqaalka ("qolofta").
Akhriska Acrobat: Barnaamijka Adobe oo kuu ogolaanaya inaad daawato dukumiintiyada PDF.
Ku dheji: Kani waa magaca feyl xog ah (tusaale ahaan shaxanka xisaabinta ama warqad wax soo saare eray ah) oo lagu wada diro farriin emayl.
Wakiilka (wakiilka): Barnaamij yar oo "caqli-gal ah" oo loo sameeyay in lagu fuliyo hawlo cayiman, fududaynta hawlgalka isticmaalaha. Tusaalaha caanka ah ee wakiilku waa Wizards-ka ka jira inta badan barnaamijyada casriga ah.
Kudar: Qaybi yutiilitida si aad ugu darto softiweer isla markaana markaa u siiso shaqeeyn wanaagsan ama aad u ballaadhiso awoodeeda si ay u fuliso hawsheeda.
Address: Waxaa loo turjumay jihada. Waxay tixraaci kartaa cinwaanka xusuusta, cinwaanka qalabka, cinwaanka IP ama cinwaanka emaylka iyo kuwa kale.
DSL: Khadadka Macaamiisha Dijital ah ee Asymmetric. Teknolojiyad si loogu gudbiyo macluumaadka dhijitaalka ah xayeysiiska sare. ADSL wuxuu ka duwan yahay adeega dial up, ADSL waxay bixisaa xawaare sare iyo xiriir joogto ah. Teknolojiyadaani waxay adeegsataa inta badan kanaalka si ay macluumaad ugu dirto isticmaaleha, iyo qayb yar oo keliya si ay macluumaad uga hesho adeegsadaha.
PGA: Dekedda xawaaraha Graphics. Waxay u oggolaaneysaa sawirrada in si dhaqso leh looga soo diro xusuusta kombiyuutarka loona soo diro xusuusta kaarka sawir gacmeedka, taas oo ah waxa soo saara astaamaha fiidiyowga ee u soo baxa kormeeraha.
Algorithm: Deji sharciyo qeexan oo lagu xalliyo dhibaatada. Barnaamijka softiweerku waa qoraalka, loogu talagalay luqadda barnaamijka, mid ama in ka badan oo algorithms ah.
Marti gelinta websaydhka (martigelinta): Adeeg ay bixiyaan bixiyeyaasha qaar, oo macaamiishooda siiya (shaqsiyaad ama shirkado) meel ay ku leeyihiin server-keeda si ay ugu martigeliyaan degel.
Abandwidth: Erey farsamo oo go'aaminaya mugga macluumaadka ku dhex wareegi kara qaab muuqaal ahaaneed ee isgaarsiinta xogta, taas oo ah, awoodda xiriir. Xajmiga xawaaraha sare, wuxuu si fiican u helayaa xawaaraha marinka iyo taraafikada sare.
ANSI (Machadka Heerarka Qaranka ee Mareykanka): Urur horumariya oo oggolaada heerarka Mareykanka. Wuxuu kaqeybqaatay abuurida heerar badan oo isticmaalka maanta internetka.
Kahortagayaasha fayraska: barnaamij raadiya oo aakhirka ka saara fayrasyada kumbuyuutarka ee laga yaabo inuu "ku dhacay" dirawal adag ama floppy disk.
Aplicación: Muddada qeexaysa softiweerka badanaa lagu dabaqo barnaamijyada loogu talagalay kuwa isticmaala dhamaadka.
Apple: Shirkadda gacanta ku haysa abuuritaanka Macintosh, iPod, iyo kuwo kale.
Applet (barnaamijka): Mini-program, guud ahaan lagu qoro luqadda barnaamijyada Java, in kastoo aysan qasab ahayn inay sidaas noqoto, oo lagu dhex dari karo bog internet si markaas adeegsadaha booqda uu ula falgalo.
Archie: Qalab kuu oggolaanaya inaad ka heshid faylasha shabakadda internetka ee laga sameeyay Montreal ee Jaamacadda McGill. Server Archie (waxaa jira dhowr qaybood oo loo qaybiyey internetka oo dhan) wuxuu hayaa keyd xog ururin ah oo diiwaangelinaya meesha ay ku yaalliin kumanaan faylal ah
ARP (Hab-maamuuska Xallinta Cinwaanka): Borotokool loogu talagalay xalinta cinwaanada elektiroonigga ah ee lambarrada IP ee ku shaqeeya shabakadaha maxalliga ah. Qeyb ka mid ah nidaamka maamuuska TCP / IP.
ARPANET (Hay'adaha Mashaariicda Cilmi-baarista Horukacsan ee NETwork, Shabakadda Hay'adaha Mashaariicda Cilmi-baarista Sare): Shabakad horudhac u ah kombuyuutarrada, oo ay aasaastay DARPA, oo ah hay'ad baaris oo ka socota dowladda Mareykanka. Waxay ahayd aasaaska aasaasiga ee lixdameeyadii horumarinta waxa hadhow noqon lahaa shabakadda internetka.
Saxeex (@): Jihooyinka email, waa astaanta kala saarta magaca isticmaalaha iyo magaca emaylkooda.
Geed (geed): Qaab dhismeedka xogta wuxuu ka kooban yahay noodhadh ay dhammaantood ku wada xiran yihiin isla markaana aysan jirin "loops".
Qaabka ARC: Foomka riixo oo ay abuureen Associates Enhancement Associates.
ASCII (Xeerka Heerka Mareykanka ee Is-weydaarsiga Macluumaadka): Qeyb ka kooban 128 xarfood, xarfaha iyo astaamaha loo adeegsado ugu horreyn Anglo-Saxon iyo guud ahaan nidaamyadii kombuyuutarka ee reer Galbeedku horey u ahaan jireen. Waxay kaliya qeexaysaa xarfaha loo adeegsaday luqadda Ingiriisiga waxayna u oggolaaneysaa saldhig guud oo isgaarsiineed. Maalmahan waxaa lagu beddelay nambarro kale oo, in kasta oo ay ku jiraan, sidoo kale ay ku jiraan xarfo lahjad iyo khaas ah oo luqad kasta u eg.
ATM (Xaaladda Wareejinta Asynchronus): ATM waa aallad-xawaare sare oo isku-dhufasho iyo beddelaad tikniyoolaji ah oo loo adeegsado in lagu gudbiyo noocyada kala duwan ee taraafikada isku mar, oo ay ku jiraan codka, fiidiyaha, iyo xogta.
Maamulka Shahaadada: Wakiil (shirkado ama cinwaanada gudaha ee shirkadaha) kuwaas oo buuxiya doorka «karaal suugaaneed». Iyaga ayaa mas'uul ka ah dammaanadda aqoonsiga shakhsiyaadka iyo shirkadaha ka qayb gala Shabakadda, iyada oo loo marayo bixinta shahaadooyinka.
Avatar (muuqaalka aadanaha ee ilaah quraafaadka Hindu): Aqoonsi khayaali ah, matalaad jireed (weji iyo jir) qof ku xiran adduunka istcimaala internetka. Dad badani waxay dhisaan shakhsiyaddooda dijitaalka ah ee ay markaa u adeegsadaan qaar ka mid ah server-yada (tusaale ahaan Forumyada) inay ku ciyaaraan ama la sheekeystaan.
AVI: Fiidiyow fudud iyo weel maqal ah oo fiidiyowyo lagu geli karo inta badan koodhadhka jira. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa fiidiyow aan la furin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Qaamuuska Kumbuyuutarka (A)